Kenya oo Sheegtay in ay Dagaal ku Qaadayso Somaliya – Rasaasa News
Oct 15, 2011 Kenya oo Sheegtay in ay Dagaal ku Qaadayso Al Shabaab
Wasiirada dhinaca ciidamada ee dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamada dalka la galiyey heegan buuxa isuna diyaarinayaan hawlgal ciidan oo ka dhan ah kooxda Al-shabaab, iyaga oo weerar ku qaadi doona gudaha dalka Somaliya.
Wasiirada gaashaandhiga iyo nabad galiyada Yusuf Xaaji iyo George Saitoti ayaa shir jaraa,id ku sheegay in ciidanka Kenya ay dabagalayaan kooxda hubaysan ee alShabaab, wasiiradu ma sheegin halka ay gaadhi doonaan ciidamadoodu.
Kenya ayaa talaabadan u qaadaysa si ay uga jawaabto afduub ay dhawaan ka gaysteen xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab kooxda Al shabaab. Maalin dhawayd ayay Al shabaab ka af duubtay gudaha Kenya laba ruux oo u shaqaynayey hayada samafalka aan xuduuda lahayn [Medecins Sans Frontieres or Doctors Without Borders (MSF)] oo la sheegay in loo soo talaabiyay dhinaca dalka Somaliya.
Saraakiil dhinaca nabad galiyada qaabilsan dalka Kenya ayaa u sheegay wariyeyaal in labada samafale xalay loo talaabiyay dhinaca Somaliya.
Kenya ayaa marar badan oo hore ay kooxda Al shabaab falal kuwan la mid ka gaysatay, sidan oo kale ayeyna ku hanjabtay in ay weerarayso xadka Somaliya.
Ururka Al shabaab iyo ururo kale oo la dagaalama Ethiopia ayaa nabad galiyo xumo baahsan ku haya gabalka waqooyi bari Kenya ee ay Somalidu degto. Waxaana ka dhacay dilal is daba joog ah oo gaadhay ilaa iyo caasimada Nairobi.
Gabalka waqooyi bari Kenya oo xili dhaw laga qaaday bandoo saaraa in ka badan 40 sano, ayaa u muuqda mid aan ka fursan doonin in bandoogii uu dib u galo, hadii aan si dhakhso ah wax laga qaban nabad galiyada.
Somalia’s Shebab Warns Kenya Will Face ‘Pain of Bullets’